Spark, mpanjifa mailaka vaovao ho an'ny iPhone tonga am-kery | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | Fampiharana iPhone, App store
Taorian'ny taona maro nitadiavana ny mailaka tonga lafatra mpanjifa ho an'ny iPhone (sy ny Mac) dia mbola tsy manana rindranasa izay tena manolotra izay rehetra tadiaviko. Na dia akaiky dia akaiky aza ny sasany (Outlook ohatra), misy ny fiasa sasany ananan'ny sasany fa tsy hita ianao. Izany no antony raha vantany vao hitako io Readdle, orinasa iray manana anisan'ireo katalaoginy fampiharana mahafinaritra toy ny Documents, Printer Pro na Scanner Pro, Handefa mpanjifa mailaka vaovao ho an'ny iOS aho ary tsy nisalasala iray minitra hangataka fidirana amin'ny Beta. Spark, izay no anaran'ny rindranasa vaovao efa anananao ao amin'ny App Store, no mpanjifako mailaka default tato ho ato, ary rehefa afaka izany rehetra izany dia afaka milaza aho fa nahazo ny toerany tao amin'ny tokotanin'ny ny iPhone.
Inona ny momba an'i Spark izay mampiavaka azy manokana? Mazava ho azy fa tsy handeha ho any amin'ny antsipiriany aho ho toy ny fanohanan'ny karazan-kaonty rehetra, ny boaty fampiroboroboana na ny fampandrenesana fanosehana, ny zavatra mahatonga ny fahasamihafana ihany no holazaiko, ary tsy isalasalana Ny tena misongadina indrindra ao amin'ny Spark dia ny boaty mailaka manan-tsaina na "Smart Inbox". Ny fananana ireo hafatra voaangona arakaraka ny sokajy fa tsy ny fandaminana mahazatra araky ny ora sy ny daty dia manampy betsaka amin'ny fitazomana ny boaty fampidirana ary koa ahafahanao maka sary haingana ary hahafantatra bebe kokoa ny zava-dehibe sy izay tsy. Amin'izao fotoana izao ianao dia afaka mandrindra amin'ny "Newsletter", "Personal" ary "Notification", na dia misy sokajy maro kokoa aza ho tonga amin'ny fanavaozana ho avy. Ary raha miditra amin'ny vondrona iray ianao ary te hamafa ny hafatra rehetra indray mandeha, dia mila mankany amin'ny farany ambany ianao dia hisintona miankavanana.
Ao amin'io Inbox Smart io dia azonao atao ihany koa sivana izay hafatra tianao ho hita sy izay tsy hitanao. Azonao atao ny manafina ireo hafatra efa novakiana, na ny sokajy Newsletter iray manontolo, azonao atao ny manafina ireo hafatra voatanisa. Ho an'ny mahazatra indrindra dia azonao atao ny mahita ny boaty mandritra ny androm-piainany, fa raha vao manandrana ny lovia maranitra ianao dia tsy miverina amin'ny kilasika. Tsy misy tsy fahampiana fihetsika swipe handraketana, hamafana, hanomana na hametahana hafatra.
Spark, ahoana no hatao raha tsy izany, manararaotra feno ireo fahafaha-manolotra natolotry ny iOS 8, mba hahafahanao manao tahirizo na hamafana hafatra mivantana avy amin'ny foibe fampandrenesana, ny efijery hidin-trano ary avy amin'ny sora-baventy fampandrenesana mihitsy aza.
Spark dia afaka mandamina ny mailakao ho azy, saingy mazava ho azy fa rehefa mampiasa azy ianao dia hianatra hanao izany tsaratsara kokoa. Azonao atao ny manova haingana ny sokajy ny mailaka tsirairay amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny antsipiriany, ary afaka misafidy raha te hahazo fampandrenesana amin'ilay mpandefa ianao na tsia, amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ny lakolosy izay miseho eo ankavanany ao anatin'ny efijery antsipirihany. Ny fandefasana hafatra, ny fanamarihana azy ho spam na ny fitehirizanao azy ho PDF dia zavatra azonao atao haingana be sy mivantana avy amin'ilay rindranasa mihitsy, andiana fiasa iray manontolo izay azo antoka fa hankasitrahan'ny mpampiasa mandroso kokoa. Ahitana valiny haingana aza ary fampandrenesana rehefa namaky ny mailaka nandefasanao azy ireo.
Saingy ny mpanjifa mailaka tsara dia tsy misy dikany androany raha tsy mifangaro tsara amin'ny serivisy fitehirizana rahona. Dropbox, OneDrive, Box, Google Drive, Azo vakiana, paosy, Evernote, OneNote ary Instapaper Izy ireo no tonga voalohany any Spark, fa maro kosa no ho tonga. Ny fandefasana rakitra iray voatahiry ao anaty rahona dia tsy ho mora kokoa, na ny fitahirizana rohy ao amin'ny Pocket na Instapaper dia efa resaka tsindry tokana. Ary ahoana ny amin'ny Apple Watch? I Spark dia hamela anao hamaky ny mailakao avy amin'ny Apple watch, ary hamaly azy ireo.
Ny safidin'ny Spark ho fanaingoana azy dia betsaka ihany koa, tsy amin'ny resaka fampisehoana ny boaty na fihetsika ihany, fa na ny fampandrenesana ny kaonty tsirairay na ny sonian'ny kaonty tsirairay aza. Ny sonia dia zavatra iray izay tena izy tany am-boalohany amin'ity rindrambaiko ity, satria tsy azonao atao ny manamboatra ny sonia isaky ny kaonty, fa ho hitanao kosa ireo sonia izay ampiasainao indrindra ary Azonao atao ny mampiasa azy ireo avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra, mandehandeha amin'ny alàlan'ny fihetsika swipe. Ekeko fa mbola tsy zatra an'io safidy io aho.
Araka ny hitanao dia manana elanelam-panahy manavaka azy mandrafitra azy ny Spark iray amin'ireo mpanjifa mailaka tsara indrindra amin'izao fotoana izao, na dia misy toerana azo hatsaraina aza. Ny fanampiana sokajy misimisy kokoa handaminana ny mailakao, ahafahan'ny hetsika misakana bebe kokoa na ny fahafaha-manamboatra sonia manokana ho an'ny kaonty tsirairay dia zavatra sasany tonga ao an-tsaiko taorian'ny fotoana nampiasako azy. Spark dia lasa mpifaninana henjana indrindra ho an'ny Outlook, ilay rindranasa Microsoft izay mandraka ankehitriny dia nibahana ny toerana voalohany tamin'ny laharako manokana. Etsy andaniny, antsipiriany iray manan-danja… fampiharana maimaimpoana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Spark, mpanjifa mailaka vaovao ho an'ny iPhone tonga am-kery
Peteco dia hoy izy:
Tsy mihemotra akory izy io
Mamaly an'i Peteco
Tsy mandeha izy, tsy afaka mampihetsika ny mailaka yahoo na aol aho ary nofafako tamin'ny iphone 6-ko
Miasa izy izao, io no mpanjifa mailaka tsara indrindra !!!! Nampiasa Sparrow aho ary tsy nisy nihoatra an'io, fa ity…. avadika in-20 !!
Ahoana no hahazoako ny sonia mailaka?
luis suarez maranitra dia hoy izy:
Izany dia niasa tsara ho ahy mandra-pinoako fa ny fanavaozana farany dia nangataka ahy ny tenimiafiko yahoo afaka 5 minitra ary ankehitriny tsy mamela ahy hiditra ao amin'ny yahoo akory ny sisa fa tsy misy na inona na inona ary ny marina dia tiako io ..
Valiny amin'i luis suarez maranitra